Ncheta ọmụmụ Bobrisky: Naịjirịa abụghị maka ndị ọkpọ ntu- Ndị Uweojii | odumblog
Ncheta ọmụmụ Bobrisky: Naịjirịa abụghị maka ndị ọkpọ ntu- Ndị Uweojii
odumblog1 year agoNo comment
posted on Aug. 31, 2019 at 11:08 pm
Ndị uweojii Lagos Steeti ekwuola na ha wakporo ebe Bobrisky hibere iji me ncheta ọmụmụ ya ụbọchị Satọdee bụ ọgọstụ 31, 2019, n’ihi ozi dị mkpa ha natara.
Onye nkwuchite ndị uwe ojii Lagos , Bala Elkana kwuru mere ka a mata na ọ bụ n’ihi ozi ha natara mere ha jiri wụchie ebe oriri na nkwari Bobrisky chọrọ ịnọ mee ncheta ọmụmụ ya. O mere ka a m mara nke a na mkparịta ụka dị mkpirsi ya na PUNCH nwere na mgbede Satọde.
N’okwu nke ya, Bala Elkana sịrị; “Enwere m ike igosipụta na anyị machiri ma mechie ebe ahụ n’ihi ozi gbara ọkpụrụkpụ anyị nwetara. Nke ahụ bụ ihe m ga – ekwu ugbu a ruo mgbe anyị mechara. ”
Ndị uwe ojii abanyela ebe mmemme ncheta ọmụmụ Bobrisky nke ụfọdụ ndị ama ama gụnyere ndị ọbịa na ndị ọkpọ ntu juputara.
Bobrisky, onye ezigbo aha ya bụ Idris Okuneye, hibere ncheta ọmụmụ ya na ‘The Pearl Gardens’, Wole Olateju Crescent, ma e si Admiralty Way, Lekki Phase 1, Lagos na-apụ.
N’izuụka gara aga, onye isi ụlọọrụ na National Council for Arts and Culture, Otunba Olusegun Runsewe, kwuru na ọ ga-emekpa Bobrisky na ndị ọzọ dịka ya ahụ, na-akọwa nwoke ọbụla na-eme ka nwaanyị bụ ihe ihere nye ọhaobodo.
Ndị uwe ojii adọọlandị niile na-akpọ ntu aka na ntị ka ha gbapụ n’obodo a ma ọ bụ ha echebiri ntaramahụhụ so ịkpọ ntu dịka o siri dị n’iwu Naịjiria, nke nyere ha afọ iri na anọ na mkpọrọ maka ndị niile sonyere mmekọ nwoke na nwoke.
Onye na-ahụbụ maka ọhaneze ndị uwe ojii na mpaghara Zone 2, Oriakụ Dolapo Badmos kwuru sị; “Ọbụrụ na ị na-edina ụdị onwe gị, Naịjirịa abụghị maka gị. E nwere iwu (Iwu megidere mmekọ nwoke na nwoke) nke na-akwadoghi otu ndị na-akpọ ntu, nwere ntaramahụhụ ruru afọ 15 n’ụlọ nga.
Ya mere, ọ bụrụ na ị bụ nwoke na-edina ụdị nwoke, hapụ obodo ma ọ bụ chebiri akwụkwọ ikpe.
Tags:BobriskyBobrisky birthdayBobrisky newsLagos policeNdi okpo ntuNews on BobriskyNPFOdumblogPolice shuts down bobrisky birthday
odumblog August 31, 2019
IPOB: Anyị amaghị ihe ọ bụla gbasara Python Dance – Ndị Gọvanọ ọwụwa Anyanwụ
Ndị gọvanọ ọwụwa anyanwụ bụ ndị eriri eri – Nnamdị Kanụ
Odum Blog16 hours ago